Dhageyso:-Maamulka G/Banaadir oo ka hadlay qasaaraha qaraxii isgayska sayidka - Awdinle Online
Dhageyso:-Maamulka G/Banaadir oo ka hadlay qasaaraha qaraxii isgayska sayidka
January 8, 2020 (Awdinle Online) –Maamulka Gobolka Banaadir ayaa faah faahin ka bixiyey khasaaraha Guud ee ka dhashay qaraxa Maanta ka dhacay Bar-Koontorool oo laga ilaaliyo Madaxtooyada Soomaaliya kaas oo ku yaalla Isgoyska Sayidka ee Magalada Muqdisho.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan Dheere ayaa sheegay in Gaariga uu ahaa mid lagu soo dhejiyey waxyaabaha qarxa balse uusan aheyn mid laga soo buuxiyey,hayeeshee uusan shaacin qofka watay Gaarigaas.
Waxaa uu sheegay in xilliga garaiga uu qarxayey uu ku jira safka baarista,isla markaana ay ku geeriyoodeen Saddex ruux Lix kalena ay ku dhaawacmeen.
Todobaadkii hore ayay aheyd markii qarax weyn oo ka dhacay isgoyska Ex Koontarool Afgooye ay ku dhinteen dad ku dhow boqol ruux, waxaana qaraxaas uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee sanadkii hore dhaca.
Previous articleIran oo shaacisay in weerarkii Saldhigyada Mareykanka ee Ciraaq ay ku dishay 80 askari
Next articleGuddoomiye Mursal oo fariin u diray beesha caalamka